Gawaarida Gaarka ah ayaa la isticmaali doonaa haddii loo baahdo dagaalka ka dhanka ah faa'iidada | RayHaber | raillynews
HometareenkaHaddii Tools Karl Specialty loo baahan yahay in Dagaal kale oo loo isticmaali
Haddii Tools Karl Specialty loo baahan yahay in Dagaal kale oo loo isticmaali
18 / 02 / 2015 tareenka, GUUD, WADADA, Headline
Haddii gaadiidka loo baahan yahay ka hor dagaallanka barafka, Gaadiidka Gaarka ah ayaa sidoo kale loo isticmaali doonaa: Kulan ayaa lagu qabtay Gobalka Kayseri si uu ula dagaallamo barafka iyo iskuduwidda. Inta lagu jiro dagaalka ka dhanka ah barafka, haddii ay dhacdo in gawaarida dadweynaha aan la ogaan karin, waxaa la go'aamiyey in ay isticmaalaan munaaradaha, samatabbixiyeyaasha iyo kaneecooyinka ay leeyihiin dadka gaarka ah iyo kan sharciga ah.
Intii lagu gudajirey Shirkii Iskudhafka iyo Iskuduwidda Barafka, dhammaan tallaabooyinka la qaadayo xilliga qaboobaha iyo xaaladaha cimilada ayaa dib loo eegay, isla markaana xiriirka ka dhexeeya qaybaha ku habboon ayaa la go'aamiyey. Sida laga soo xigtay go'aanka ka soo baxay kulanka, tallaabooyinka taraafikada ee la qaadayo xilliga qaboobaha ee waddooyinka iyo waddooyinka magaalada, dhammaan xaafadaha ayaa laga yaabaa inay ka dhacaan xaaladaha cimilada xun ee Metropolitan, Melikgazi, Kocasinan, baabuurta barafka lagu heli karo gacmahooda si ay u sameeyaan barafka iyo shaqo nadiifinta wadada. Intaa waxaa dheer, in magaalada hareeraheeda magaalada Hisarcik wadada ka dib wadada u horseeday Erciyes iyo Erciyes u dhexeeya xajka iyo wadooyinka 6. Qeybaha wadada ee ka baxsan aagga mas'uuliyadda Agaasimaha Gobolka ee xilliga qaboobaha ayaa laga yaabaa inay ku dhacaan xaaladaha cimilada ee xun ee barafka iyo baraf barafka iyo hawlaha waddooyinka ayaa la sameyn doonaa.
Inta lagu jiro xilliga qaboobaha ee ka soo horjeeda saboolnimada laga yaabo inay ku dhacdo xaaladaha cimilo-xumada xaaladaha Boliiska iyo Kooxaha Taraafikada Gandarmeri, waxay isticmaali doonaan gawaarida jiilaalka ah, waxay qaadan doonaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo xaqiijiyo ammaanka muwaadiniinta iyo hantida xaaladaha xun ee cimilada. Wadooyinka 6. Agaasimaha Gobalka, oo mas'uulka ka ah waddooyinka gobolka iyo wadooyinka gobolka ee gobolka oo dhan ayaa laga yaabaa inay ku dhacaan xaaladaha cimilada xun ee gacanta qalabka baabuurta barafka iyo shaqaaluhu waxay qaban doonaan shaqada lagama maarmaanka ah. DSI 12. Agaasimaha Gobalka, haddii ay dhacdo xaalado cimilo-xumo oo laga yaabo inay ka dhacaan guud ahaan gobolka oo adeegsanaya adeegyada rasmiga ah ee mashiinada dhismaha, haddii loo baahdo, waxay ka caawin doonaan hay'adaha kale ee rasmiga ah inay ka qeyb qaataan dagaalka ka dhanka ah barafka.
Meteorology 7. Agaasimaha Gobolka, inta lagu jiro xilliga qaboobaha xilliga qaboobaha, baraf, nooca cimilada cimilada ee xaaladaha noocaas oo kale ah maalinta ka horaysa waddooyinka 6. Agaasimaha Gobollada, Metropolitan, Melikgazi iyo duqa magaalada Kocasinan ee cutubyada barafka, Taliyaha Gandarmarka Gandarmarka ee Wasaaradda Gaadiidka, Waaxda Bilayska Waaxda Gadiidka Gaadiidka Gobollada Gobolka iyo magaaladu waxay u wargalinayaan Waaxda Fududeynta Farsamada. Waxaa intaa dheer, wadada Pınarbaşı-Göksun wadada Dikusdolambaç, Wadada Pınarbaşı-Gürün marinka Isku-xirirka, Wadada Yaasilhisar-Nigde Wadada Arapli, Wadada Kayseri-Sivas Wadooyinka soo-saarka ee saadaalinta cimilada xaaladaha gaarka ah sida xilliga qaboobaha 6. Agaasimaha Gobolka si loo ogeysiiyo.
Inta lagu jiro xilliga jiilaalka, si joogto ah u kontaroolida shabakadaha korontada ee xaaladaha cimilada ee ka soo horjeeda korantada korontada Kayseri iyo Shirkada Korantada Ganacsiga ayaa isla markiiba qaadan doonta tallaabooyinka lagama maarmaanka ah. Haddii ay jirto gaadiid aan ku filnayn gaadiidka dadweynaha, haddii loo baahdo, munaarado, samatabbixiyeyaash iyo kaneecooyin ay leeyihiin dad gaar ah iyo kuwa sharciga ah ayaa loo isticmaali doonaa.
Haddii ay dhacdo xiritaanka wadada sababta oo ah xaaladaha cimilada xun ee wadooyinka gobolka ee ku xiran Kayseri ilaa gobolada kale; Kayseri-Malatya oo xiran waddada waddada, mareegaha Mimarsinan ayaa xiray kooxo waaxda Maamulka Isku-xirka Gaadiidka ee Gobolka Regional, darawallada ka soo jeeda dhinaca jihada Kayseri-Sivas ayaa lagu hagaajin doonaa jihada Bünyan Pınarbaşı. Haddii wadada Kayseri-Nevsehir ay xirto, baabuurta ka imaanaysa Boğazköprü ilaa jihadaas waxaa loo diri doonaa wadada Himmetdede-Kalaba, gawaarida ka socota dhinaca Ankara-Kayseri si ay u wajahaan Malatya-Sivas, iyo kuwa isticmaali doona jidka Boğazköprü, waxay isticmaali doonaan Waddada Ring Road 'Nu, si la mid ah kuwa ka yimid jasiiradda Sivas-Malatya ee xarunta magaalada ayaa la siin doonaa si loo isticmaalo jidka isku midka ah. Wadada weyn ee Kayseri-Ankara ma ahan waddo kale haddii ay dhacdo in la xiro, gawaaridu waxay tagi doonaan jihadaas lagu hayn doono bartamaha magaalada. Inkasta oo dhammaan tallaabooyinka laga qaaday jidadkaas, haddii ay dhacdo in la xiro waddooyinka, ururrada ayaa laga codsan doonaa inay si dhakhso ah u diraan gawaarida gobollada deriska ah. Xaaladaha khatarta ah, xarumaha basaska ee Kayseri, xarunta degmada Pinarbasi, xarunta gobolka ee Yesilhisar ayaa loogu talagalay inay noqoto goobaha sugitaanka, xaaladaha degdegga ah iyo xaaladaha degdegga ah ee xarumaha degmada ugu dhow iyo saldhigyada shidaalka ayaa la siin doonaa rakaabka.
7 Meteorology xaaladaha cimilada xun. Iyadoo ay ku xiran tahay warbixinnada cimilada cimilada ee laga qaadayo Agaasimaha Gobollada, saraakiisha fulinta sharcigu waxay sii wadi doonaan gaadiidka leh hannaanka samatabbixiyaha ee gobollada ku habboon haddii ay suurtogal tahay in labada baabuur ee waawayn iyo kuwa yaryar ay ku sii jiri karaan waddada xuduudaha masuuliyada. Gaar ahaan, iyada oo la tixgelinayo dhacdooyinkii sanooyinkii hore ee waddada isku xiraya xarumaha gobolka Kayseri iyo xarunta degmada Develi, Highways 6. Agaasimaha Gobollada, Dawlada Hoose iyo Hay'adaha Hirgelinta Sharciga ayaa wada xiriir joogto ah.
Ururrada rayidka ah ee rasmiga ah ee la dagaallanka barafka iyo hawlaha samatabbixinta si wadajir ah loogu qoondeeyay dhismaha mishiinka iyo tas-hiilaadka, sugitaanka rakaabka in la qabto xilliga sugitaanka baaritaan caafimaad ayaa waxaa sameeyn doona Kooxda Agaasinka Caafimaadka ee Gobolka ayaa loo magacaabi doonaa kooxda.
Waddooyinka barafka la daboolay, qandaraaslayaashu waxay ku jireen fasalka barafka
Wareegga Wareega ee Barqashada Barafka ee Izmir
Gawaarida culus iyo gaadiidka gawaadhida ma gali doonaan Istanbul
(PRIVate NEWS) Shirkadaha Xawaaladaha Xawaaladda Sanadka 2012 Shirkadda Xawaaladda Kat
Gaariga ugu horreeya ee farsamada gacanta ee Anatolianka ayaa lagu dhisi doonaa Karlitepe | Istanbul -Beykoz
Gaariga ugu horreeya ee telefanka ee Anatolianka waxaa lagu dhisi doonaa Karlitepe | Istanbul -Beykoz
Geedaha ma gooyaan gaariga ma isticmaalayo gaariga
Ka taxaddar dadka degaanka! BuKart 17 waxaa loo isticmaali doonaa degmada oo dhan
Wadooyinka 6. Agaasimaha Gobolka
Trouvasses ee Malatya waxay isku diyaariyaan qaadista rakaab
Kayseri si loo gaaro xawaaraha sare ee tareenka ee 2018